छोरीले आफ्नै बुवासँग भनिन् “म तिम्रै विर्यको एक थोपा हुँ, बरु भन तिम्रो विर्यको मुल्य कति हो ? म चुक्ता गर्न चाहान्छु ! जसको कारण म आज धर्तीमा छु त्यसको मूल्य कति हो ?” सत्य घटनामा आधारित « Light Nepal
छोरीले आफ्नै बुवासँग भनिन् “म तिम्रै विर्यको एक थोपा हुँ, बरु भन तिम्रो विर्यको मुल्य कति हो ? म चुक्ता गर्न चाहान्छु ! जसको कारण म आज धर्तीमा छु त्यसको मूल्य कति हो ?” सत्य घटनामा आधारित
Published On : 8 January, 2018 1:47 am
(यथार्थ घटनामा आधारित) श्रोत महिला खबरबाट